सेक्स पचाउँदै समाज ! – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० मंसिर २०७७, बुधबार २२:०२ English
प्रविधिको सहज पहुाचका कारण खल्तीमै बोकेको मोबाइलबाट संसार नियाल्न सकिने अवस्था आइसकेको छ । इन्टरनेटले र्गदा युवापुस्ता आफूले चाहेको जुनसुकै कुरा पनि हेर्न सक्ने अवस्थामा छन् । यस्तो प्रविधिमा र्हुकिएको पुस्ताले सिनेमामा आएका ग्ल्यामरस दृश्यलाई सहज रुपमा लिन थाल्नु स्वभाविक हो । डि्रम्स एन्ड आइडियाजका संस्थापक अभिनव कसजू भन्छन् ‘अमेरकिा र काठमाडौामा र्हुकिएको बच्चाले प्रयोग गर्ने प्रविधिमा खासै फरक हुन छाडिसक्यो, त्यसैले त यस्ता कुराप्रति उनीहरुलाई खासै मतलब छैन ।’ मनोरञ्जन पत्रपत्रिकामा छापिने मोडलका ब्लोअप, फेसन टीभी र्कायक्रम, कलात्मक फोटोग्राफीको थालनीजस्ता कारणले पनि यस्ता कुरा समाजमा पाच्य बन्दै गएका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्थासँगै समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुरा प्राथमिकतामा पर्‍यो । त् सिनेमाको उदेश्य सन्देश दिनुमा मात्रै खुम्चिएन । सामाजिक मूल्य, मान्यतामा परर्वितन आउन थालेपछि सिनेमाले समेत व्यावसायिक रुप लिन थाल्यो । नायिकालाई ग्ल्यामरस देखाएर बजारमा बेच्ने क्रम यहीबेलादेखि शुरु भएको खरेलको भनाइ छ । Source: filmnepal.com
१६ जेष्ठ २०६९, मंगलवार १९:१४ मा प्रकाशित